နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: Photoshop CS4 သင်ခန်းစာများ
loveronline: photoshop lessson လေးတွေကိုများများတင်ပေးစေချင်ပါတယ်
ဒါကတော့ Photoshop ကျွမ်းကျင်လိုသူတိုင်းအတွက် အထူးပဲသင့်လျှော်ပါတယ် .. CS4 အသုံးပြုနည်းပါ .. သင်ခန်းစာတွေအများကြီးပါပါတယ် . အဆင့်မြင့် လက်တွေ့သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါတယ် .. စိတ်ဝင်စားရင် Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် . ရောင်းဈေး $149.95 ရှိပါတယ် . မူလလင့်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ် .. (url : http://store.lynda.com/productinfo.aspx?productid=758 )
Download rapidshare - Part(1) ၊ Part(2) ၊ Part(3) ၊ Part(4) ၊ Part(5) ၊ Part(6)
Posted by Hajee Than Hla Oo at 5:01 AM